Sina Fampisehoana ampahany amin'ny orinasa mpamokatra vokatra sy mpamokatra | Zhenyuan
Miaraka amin'ny fampivoarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fampiharana ny firafitry ny vy amin'ny injenieran'ny fananganana dia be dia be manerantany. Welding dia teknolojia fanodinana tena manan-danja amin'ny famokarana firafitry ny vy. Araka ny statistikan'ireo firenena mandroso indostrialy, ny vy ampiasaina aorian'ny fametahana dia mitentina 45% ny vokatra vy isan-taona. Sina hatramin'ny faran'ny taona 1980, rafitra vy miharo dia nanisa ny 30% tamin'ny vokatra vy.
Tamin'ny 1992, 80 tapitrisa taonina ny vokatra vy naterak'i Shina, saingy tamin'ny faran'ny taona 1997 dia nahatratra 94 tapitrisa taonina ny vokatra vy tany Chine. Raha ny firoboroboan'ny fampandrosoana dia hamaky 100 tapitrisa taonina ny vokatra vy any Shina aorian'ny nidirany tamin'ny taonjato vaovao.
Endri-javatra ny firafitry ny vy:
Ho an'ny vy mihodina (Angle vy, vy vy, fantsom-by, fantsom-by, sns., Mamorona vy matevina amin'ny rindrina, takelaka vy, tady mangatsiaka ary tariby ho singa fototra, amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana, kofehy na rivet, araka ny fitsipika sasantsasany mba hifandray ao anaty vatan'ny fananganana ifotony, tsy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny welding, bolt na rivet connection dia mampifandray ireo banga fananganana fototra ho lasa rafitra toy ny firafitra vy mahazaka ny enta-mavesatra.
Hery lehibe sy vainga kely. Ny tanjaky ny vy dia im-betsaka kokoa noho ny hazo, biriky sy vato, beton ary fitaovana fananganana hafa. Noho izany, rehefa mitovy ny enta-mavesatra sy ny fepetra, ny firafitra vita amin'ny vy dia manana lanja maty kely kokoa, faritra kely takiana, ary mety kokoa amin'ny fitaterana sy ny fananganana.
(2) Plastika tsara sy henjana. Ny plastika dia manana plastika tsara, amin'ny ankapobeny, dia tsy vokatry ny fihoaram-pefy tsy nahy na ny fihoaram-pefy eo an-toerana vokatry ny tsy fahombiazan'ny vaky tampoka, fa miseho mialoha ny fivoaran'ny fambara lehibe kokoa, mba handraisana fepetra fanarenana .Ny vy koa dia manana hasiana tsara sy fahaiza-mampifanaraka matanjaka amin'ny enta-mavesatra mavitrika miorina amin'ny rafitra, izay manome antoka azo antoka ho an'ny fampiasana azo antoka ny firafitry ny vy.
Fitaovana fanamiana. Ny firafitra anatiny misy ny vy dia mitovy, ny toetra ara-batana sy ara-mekanika amin'ny lalana rehetra dia mitovy ihany, tena akaiky ny vatana isotropika, ao anatin'ny adin-tsaina maromaro, ny vy amin'ny fanjakana lasitike mety, ary ny fototra ny fiheverana ampiasain'ny mekanika injeniera dia mifanaraka kokoa, noho izany ny valin'ny kajy dia marina sy azo itokisana.
Mora ny manamboatra. Ny firafitry ny vy dia misy fizarana voahodina isan-karazany sy takelaka vy, izay amboarina ho singa fototra amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana, kofehy na rivet, ary avy eo entina any amin'ilay tranokala hanaovana fivoriambe sy fampisarahana. Noho izany, tsotra ny fanamboarana , fohy ny fihodinan'ny fampiharana, avo ny fahaiza-manao ary ny fanamboarana, ny fanoloana dia mety ihany koa. Ity fomba fanamboarana ny fanamboarana orinasa ity sy ny fametrahana tranokala dia manana tombony amin'ny famokarana andiam-bokatra betsaka sy ny fametrahana tanteraka ny vokatra vita ary namorona fepetra hampihenana ny ny vola lany ary mitondra ny tombony ara-toekarena amin'ny fampiasam-bola.
(5) fanoherana ny harafesina ratsy. Ny firafitry ny vy vita amin'ny vy dia mora harafesina amin'ny rivotra, indrindra amin'ny hamandoana na ny harafesina manimba harafesina amin'ny medium manimba, ka matetika no mila fanamboarana sy fikojakojana, toy ny harafesina, coating, sns. avo.
Ny fanoherana ny hafanana avo lenta. Ny vy dia tsy mahatohitra hafanana ambony, miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana, hihena ny tanjaky ny vy. Ao anaty afo, ny firafitra vy tsy misy fiarovana dia azo tazonina mandritra ny 20 minitra, ka ny firafitra vy lehibe dia tsy maintsy mitandrina. raiso ny fepetra fisorohana ny afo, toy ny amin'ny firafitra vy any ivelan'ny beton-mofo na fitaovan'ny afo hafa, na ny firafitry ny afo mipetaka ambonin'ireo singa.
Ny fampisehoana vokatra semi-vita alohan'ny handokoana dia vita araka ny isa isa. Ny isa dia manondro fa ireo ampahany tsy nolokoina dia aterina araka ny filaharan'ny isa, tsy maninona ny fitaterana na ny fametrahana azy
Previous: Sehatra famokarana ampahany amin'ny orinasa
Manaraka: Fampiharana vokatra ho an'ny orinasa
Famokarana sy famoronana orinasa fampidirana